Midow-ga Yurub Oo isku Xidhay Daabacaada Manhajka Somaliland | Gabiley News Online
Midow-ga Yurub Oo isku Xidhay Daabacaada Manhajka Somaliland
Hargeysa(GNO)Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Cabdillaahi Ibraahin Habbane, ayaa sheegay inaanay jirin wax buugaag ah oo dugsiyada dalka iyo wasaaradda waxbarashada EU-du u daabacayso.
Wasiirka oo ka hadlayay kulan uu la yeeshay maamulayaasha dugsiyada gaar loo leeyahay ayaa sheegay in EU-du doonayso inay buugaagta Somaliya iyo kuwa Somaliland mar soo wada daabacdo iyagoo isku mid ah.
“Buugaag la inoo soo daabacayaa ma jirto, EU-da si xun ayaanu u wada hadlay,waxay doonayaan inay Somali oo dhan mar u wada daabacaan boqol kharash aanay bixin” ayuu yidhi Cabdillahi Habbane.
Wasiirka ayaa sheegay in EU-du diidan tahay inay inoo daabacaan Manhajkeenii waxbarasho oo dib u habayn lagu sameeyay, waxaanu sheegay inay yidhaahdeen waanu idin maalgalinaynaa.
“Manhajkeenaa ilaa maanta soo bixi la iyagaa dabada haysta, waxay yidhaahdeen manaahiijta ayaan maalgalinaynaa, 10 Kun oo dollar maxay maalgaliyaan, waar inaga ayaa isku tashanayna waxaynu leenahay ayaynu samaysani, buugaagta waxaan ku idhi annaga ayaa daabacanayna ee noo iibiya madbacad casri, yaa idiin wadaya ayay ku odhanayaan waxay inaga dhigayaan wax aan jirin.”ayuu yidhi Wasiirka waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Somaliland.
Hadalkan wasiirka ayaa ku soo beegmaya, iyadoo dhawaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland sheegtay inay bedeshay Manhajkii waxbarasho ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland.